China FOTON H7 fekitori uye vagadziri | Foton
Nekuda kwekukwirisa kwepamusoro maererano nesarudzo uye musiyano wekugona, inogona kuitirwa yekufamba kwemasikati uye kutakura kwekufambisa. Izvo zvinoshandiswa, powertrain, kugadzirisa uye kugadzirwa zvakarongeka zvakagadzirirwa hupenyu hurefu.
Kunopindirana Dimension 7300 * 2230 * 3030 (iine A / C)
Kurambidza Kurema 6T
Kugara Kugona 21 + 1/23 + 1/25 + 1/28 + 1
Iyo nyowani Foton H7 inosanganisa yakakwira mashandiro nekunyaradza, uye ruzha mhando nekunakisisa kuchengetedzeka. Kukoshesa kwakawanda kwakaiswa kwete chete pane yayo aerodynamic dhizaini uye yakasarudzika kutyaira hunhu, asi zvakare kunyanya pamabatiro ayo anoshanda peturu uye yakaderera hupenyu-kutenderera mitengo.
Yakanaka PowertrainWith yemhando yepamusoro nzira dzemagetsi uye kugona kweR & D yakakura, Foton 7M yakateedzana bhazi ine yakanakisa powertrain system, iine yakawedzera mota mashandiro uye yakaderera kushandiswa.
Yakatanhamara kutanga kuita, kunyanya patembiricha yekupedzisira, -40ºC;
Kudengenyeka kwepasi, ruzha rwezasi rwekutyaira wakasununguka, 7% yakaderera pane zvimwe zvigadzirwa zvinokwikwidza;
Kurema kunongosvika 340kg, 15% -60% yakareruka kupfuura zvimwe zvinokwikwidza zvigadzirwa.
Kuburitsa parita imwe inosvika 33.2kW / L, 10-35% yakakwira kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvinokwikwidza;
Maximum torque inosvika 600NM, yakaitwa mushe-kukwira.
Hupenyu hwese hwemafuta kuzadza hunowanikwa
Ekisero dzimba pamwe yakakosha kugadzira, zvakanaka kuomarara uye yakakwirira simba;
Yekupedzisira kudzikisira mota ine compact mamiriro, yakasimba-giya giya ine iri nani lubrication conditio;
Ruzha rwakaderera uye kugona kukuru kwekufambisa, kuverengera mota kunyaradza uye hupfumi.
Zvichienderana neakakura matanho eFoton marori chassis matekiniki, Foton bhazi yagadzira iyo chassis kunatsiridza yeakaenzana anoenderana bhazi chimiro:
Kuvimbika kwakawedzera ne30% Kuwedzera chassis furemu, yakanyanya kudzikama Kwekuchengetedza coefficient inosimudzirwa zvakanyanya Kuwana kugamuchirwa kwakazara mumisika yepasirese.
Mberi disc bhureki & Rear dhiramu rakaputsa
Kupisa kwakanaka kupisa kupisa, kugadzirisa kudzikama uye braking kushanda kweiyo braking system Rakareruka dhizaini uye yakanaka yekupisa kuderera uye kupora Yakadzikama braking ine yakanyanya kuchengetedzwa, yakaderera simba kushandiswa, hupenyu hurefu hwebasa.
Lane yekuyambira yambiro system (LDWS) Sisitimu inoyambira mutyairi kana mota yatanga nzira isingadiwe